Faritra Atsimo:HANOMBOKA NY FAMPANDROSOANA -
AccueilRaharaham-pirenenaFaritra Atsimo:HANOMBOKA NY FAMPANDROSOANA
20/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mivandravandra tsy takona afenina ny fahoriana sy ny fahantran’ny Faritra Atsimo. Variana tamin’ny adilahy politika sy ny fitiavan-tena ny mpitondra nifandimby nanomboka ny taona 1975. Tsy nitsahatra nitontongana ny fari-piainan’ny vahoaka any Atsimo, nataon’ireo mpitondra teo aloha (Didier Ratsiraka, Zafy Albert, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina) fitaovana politika fotsiny. Potika tanteraka ny fotodrafitrasa, tsy nisy programa na tetikasa niahiana ny fiainan’ireo vahoaka koa tsy mahagaga ankehitriny raha miaina ambanin’ny roa dolara ny 97%-n’ny mponina any amin’iny Faritra Atsimo iny.
Nambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fandalovany tao Ambovombe ny tetikasa goavana ho an’ny Faritra Atsimo dia ny hambolena ny velarantany mirefy hatrany amin’ny 400 Ha izay hanomboka amin’ny volana Febroary 2017 ho avy izao. Hanomboka amin’izay tokoa ny tena Fampandrosoana ny Faritra Atsimo ka niantsoan’ny Filoha ny vahoaka mba tsy ho resy tosiky ny tsaho. « Efa tafapetraka ankehitriny ny vatofantsiky ny Fampandrosoana », hoy ny Filoha.
Tsy afa-misaraka amin’izany Fampandrosoana izany ny fanarenana sy ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa izay tena potika tanteraka tsy nisy mpijery an-taonany maro. Eo koa anefa ny sehatry ny fanabeazana izay tsy ataon’ny filoham-pirenena ambanin-javatra mihitsy ka nanambarany ny hanomezana lycée, « laboratoire » ary trano famakiam-boky ho an’ny tanora ao Ambovombe, ankoatra ireo masomboly (katsaka) milanja 5 T, fiarakodia ary « charrue » miisa 50. Nitondra « Hery Vaovao » ho an’ny Faritra Ambovombe tokoa iny fandalovan’ny Filoha sy ny delegasiona notarihan’ny praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana farany teo iny.
Tonga teto Madagasikara omaly i Ramtane Lamamra tompon’andraikitra ambony eo anivon’ ny vondrona afrikanina, ity farany izay efa tsy zoviana amin’ ny maro intsony nandritra ny fanelanelanana nisy nandritra ny krizy ny taona 2009. Ny ...Tohiny